Indawo: Ikhaya » Ukuthumela » Izindaba Zocingo » Ukwelashwa Okusha Okubukhali Kwe-Migraine
Ucwaningo lwezwe lwangempela olubuyekezwe ngontanga lwedivayisi ye-migraine lubonisa ukuthi i-remote electrical neuromodulation (REN) inikeza inketho yokwelapha eyingozi engenazo izidakamizwa ephephile futhi ephumelelayo kwabaphethwe yi-migraine.
I-Theranica, inkampani enqunyiwe ye-digital therapeuticals eyenza i-electroceuticals ethuthukisiwe ye-migraine nezinye izimo zobuhlungu, imemezele namuhla ukushicilelwa kocwaningo olusha olubuyekezwe kontanga oluhlaziya ukusebenza kahle, ukuphepha kanye nokusimama kwe-remote electrical neuromodulation (REN) njenge-standalone, kanye ne-adjunct yemithi, ukwelashwa kwe-migraine. Ucwaningo lobufakazi bomhlaba wangempela olushicilelwe ku-Frontiers ku-Pain Research Journal luphetha ngokuthi i-REN, elawulwa umkhiqizo ohamba phambili we-Theranica i-Nerivio®, isebenza kahle kuwo wonke amapharamitha amathathu.
Imiphumela evela ekuhlaziyweni kwemithi yokwelapha engaphezu kuka-23,000, eqoqwe esikhathini esiyizinyanga eziyi-19, ibonise ukusebenza ngempumelelo okukhulu kwe-REN. Ku-66.5% wokwelashwa, i-REN yasetshenziswa njengokwelashwa okuzimele. Cishe ku-80% wemithi yokwelapha, ayikho enye imithi enqunyiwe eyasetshenziswa. Ezigulini ze-2,514 ezifakwe ekuhlaziyweni kokusebenza kahle, i-32% yeziguli ze-episodic migraine kanye ne-21% yeziguli ezingapheli ze-migraine, bathola inkululeko yobuhlungu amahora amabili ngemva kokwelashwa ezindaweni eziningi zokwelapha zabo, futhi ngaphezu kwe-65% bathola ukukhululeka kobuhlungu obuqhubekayo ngemva kwamahora amabili. . Ekuhlaziyweni kokuphepha, kuphela ababambiqhaza abangu-59 kwabangu-12,368 (0.48%) ababike noma yiziphi izehlakalo ezimbi ezihlobene nedivayisi, eziningi zazo ebezimancane (56) ngaphandle kwemibiko yanoma yiziphi izehlakalo ezinzima.
Igqoke engalweni engenhla ekuqaleni kokuhlasela kwe-migraine, i-Nerivio inciphisa ubuhlungu bekhanda elibuhlungu kanye nezimpawu ezihambisanayo ngokusebenzisa i-REN ukuze iqalise indlela yokunciphisa ubuhlungu engapheli, eyaziwa ngokuthi i-conditioned pain modulation (CPM). Idivayisi ilawulwa ngohlelo lokusebenza lwe-smartphone, okuvumela iziguli ukuthi zibeke ukuqina kokwelashwa kwazo kanye nokugcina idayari ye-migraine eyakhelwe ngaphakathi engabelana kalula nodokotela ukuze kuthuthukiswe ukulandelela nokuphathwa kwe-migraine.
I-Nerivio iyisigqoko esinqunyiwe, esixhumeke ngokwedijithali. Ucwaningo lwezokwelapha lubonise ukuthi i-Nerivio iyasebenza futhi iphephile ekwelapheni i-episodic ne-chronic migraine kubantu abaneminyaka engu-12 nangaphezulu.
Ukuthuthukisa Ukuphila Kweziguli Ze-Medicare Ngezifo Zezinso Manje